Snapchat kugula Tool Exact 2020 - lomnqweno yimfumba obububo
Isilimela 6, 2018	off	by exacthacks
Siyazi snapchat into ethandwa kakhulu umphululela app apho umhla sokuqala sokukhululwa Sep 2011. Oko ekuqaleni wadalwa amasebe ezikhoyo inkampani Inc Snap ngo 3 ezahlukeneyo USA zixeko Vines, Los Angeles and California.
Le app Iyamangalisa ezivumela ukuba wabelane zakho imifanekiso kunye neevidiyo kulo lonke ihlabathi. Unakho ukuqhagamshela nabahlobo bakho snapchat camera. Xa usenza umfanekiso okanye ividiyo yikhamera kwifowuni yakho, le app ngokuzenzekelayo ukuqhagamshela abahlobo bakho uze ucele ukuba wabelane izinto zakho nabo.
Ngoko ke uhlobo entsha camera apho abasebenzisi 180 izigidi emhlabeni. Snapchat ezinye iimpawu ezintsha bayakwazi ukuhlela pics zakho kwezinye ubheka umdla. Yinto app enomtsalane ngenene for Android kanye iOS izixhobo. Siyazi kutheni apha ngoko akuyomfuneko ukuba ufumane okungakumbi my njani omnye umntu snapchat ngaphandle yokuqinisekisa abantu 2020.
Yintoni Snapchat kugula Tool Exact 2020?
Oku engeniswa kakhulu ukwazi ukuba yintoni na ufumana ukusuka kwisayithi yethu njani ukuba imisebenzi. Ubuya kuba khangela ezinye iisayithi abo abasayi kuchitha kunye nabasebenzisi zabo baze bafune uphando olupheleleyo okanye bahlawule ngenxa yomsebenzi wabo. Kodwa ubukhulu becala kukunika nokuxakaniseka ngenxa yokuba iintsholongwane okanye ziphelelwe iintlelo ze Snap Chat kugula APK.
Wonke umntu kufuneka kumnandi kunye nabahlobo babo Snapchat ukuba kufuneka ithuba ngawo. Ngoku ke kunokwenzeka ukuba nabani na ukuba uya umxokozelo le Snapchat kugula Tool Exact 2020 ngaphandle yokuqinisekisa abantu. Uyakwazi my nayiphi akhawunti snapchat usebenzisa le nkqubo ngaphandle kokuba ingxaki.
Iqela lethu Uchwepheshe babe ukudala le sixhobo lomnqweno yimfumba eyoyikekayo isebenza kuzo zonke eqongeni ukuba Akukhathaliseki ukuba asetyenziselwa ntoni kwindlela:
lo Snapchat password buyisela ubhalo oluqhelekileyo kuya kukunceda ukuba ufumane abahlobo bakho akhawunti password kwaye ukuvula ii-akhawunti zazo ngaphandle uyamazi. Yinto enamandla ngenene isixhobo password cracker kwaye bafake ngqo kwiseva database of snapchat.
Ukuba ufuna ngokwenene ufuna ukwazi “indlela my akhawunti Snapchat 2020” ngoko musani ukulinda uze ugcine ixesha yakho ukulanda Password yethu Snapchat Finder.
Ngaba Safe & free?
Thina uwusondeza imveliso yethu simahla indleko ngeli xesha ngomso kusenokungabikho. Ngoko ke, ukuba unexhala malunga nawo nawuphi na umngcipheko yokusebenzisa le Snapchat akhawunti Password kugula ke uya kuqinisekisa ukuba ukuba ihlolwe ngaphambi ukukhulula kwaye 100% umphumela omuhle.
Isizathu Cebisa Snapchat Akhawunti kugula yethu 2020:
Thina iqela Uchwepheshe professional abaye 10 iminyaka amava kusiko kwaye bayazi ukuba iimpawu eziyimfuneko ukuze ukhuseleko lwabasebenzisi. Ngoko ke siza kukuxelela kutheni sincoma yethu Snapchat Akhawunti kugula 2020 ngezantsi iinkcukacha:
Ungakwazi my imifanekiso, videos, chatlogs kunye negama lokugqitha le akhawunti.
Akukho mfuneko ukulanda le program, wonke ungafumana le Snapchat akhawunti lomnqweno yimfumba ngaphandle yokuqinisekisa abantu.
Anti-Ban script & ukhuseleko Proxy iyafumaneka ukhuseleko akhawunti [akukho bani unako ndanibambisa ebomvu izinikele].
Xa download le mveliso iya kusebenza ngonaphakade ngenxa kokuba ihlaziywa rhoqo.
Indlela Yokusebenzisa Of Snapchat Akhawunti kugula Tool?
Snapchat kugula Tool Exact 2020 kulula kakhulu ukuba ukusebenzisa, ufuna nje ukuba ufake igama lomsebenzisi akhawunti ekujoliswe wakho uze wenze isigqibo ngento ofuna zizame kuloo mntu ezifana:
Ukuba udinga lokugqitha (ewe)
Khetha le ndlela kunye umthwalo okanye umxokozelo plugins khetho cofa ukuba kuyimfuneko. Emva koko nqakraza ngokulula kwi “Qala Process” iqhosha kwaye ulinde kude nkqubo iza kukuphelelisa. Fumana Snapchat Extractor Password info ngemvume ngaphandle kokwazi nayiphi na enye.
Ukuba unengxaki ethile ukufaka zethu Snapchat zangena APK ku Android okanye iOS izixhobo. Ngoko ke kufuneka ube ukuyifaka kwi Iindlela window [PC, IMac, laptop. Emva koko ke kuya kusebenza 100% Ukuqiniseka okanye usithumelele umyalezo.
CategoryAndroid kugula Izixhobo kugula iOS kugula Sites Social
tagsSnapchat Akhawunti kugula 2018 Snapchat akhawunti my Ngaphandle Human Verification Snapchat kugula No Survey
EyoKwindla 15, 2019 e 11:54 pm
Okokugqibela i got le nkqubo ababe USA